Maxaad Kala Socotaa Qisadii Jacayl Ee Ku Dhacday Fannaanadda Caanka Ah Ee Binti Cumar Gacal?- Q:7aad | FooreNews
Home Aragtida Dadweynaha Maxaad Kala Socotaa Qisadii Jacayl Ee Ku Dhacday Fannaanadda Caanka Ah Ee Binti Cumar Gacal?- Q:7aad
Maxaad Kala Socotaa Qisadii Jacayl Ee Ku Dhacday Fannaanadda Caanka Ah Ee Binti Cumar Gacal?- Q:7aad
FoorenewsNov 25, 2017Aragtida Dadweynaha, Barnaamijo, wararka0
Isla markiiba heestii baan xafiday, muddo kooban oo dhawr saacadood kadib ahna waaban qaaday oo aan ku luuqeeyey. Kadib waa la iga duubay. Gelinkii dambe ayaan heeskii oo duuban qaaday oo aan u geeyey ninkii aannu xidhiidhka lahayn ee xalay waxa aan idiinka soo sheekeeyey igu sameeyey. Isagiibaan farta ka saaray heestii oo aan ku idhi waar dhagayso oo aniga ammaan I sii mar dambena ha I soo hadal qaadin. Waxaan ku idhi nabadeey walaal ammaan I sii oo dib ha ii soo hadal qaadin. Heeskaasi Luggooyo oo dadka qaar u yaqaannaan Axdi sidaasi ayuu ku yimid. Abwaanka Barre Maxamed Fiidow waxa uu igu yidhi qisadaasi waxa ay mudan tahay in heestan laga sameeyo haddii ay innoo suurto gashana waxaan kaa ballan qaadayaa in iyada oo qaabka musalsalka oo kale ah aan ka samayno qisadaasi kugu dhacday. Annaga oo sidii ku ballanay Abwaanka in uu qisadaasi ka sameeyo filim musalsal ahna qabtii iyo dagaaladii Soomaaliya ayaaba dhacday. In qisada ninkaasi naga dhaxaysay ay ahayd muddo laba sano ah waa uu ogaa abwaanku sidaasi ayuu heesta LUGGOOYO ugu bilaabayaa Axdigeynu laba sano.
Aduu heestaasi caan ayay noqotay oo cirka ayay martay. Magaalada iyo dalka oo dhan ayay xushay oo dhallinyarada ayaa aad u dhagaysan jirtay. Markii heesta la sameeyey xataa waxaan soo ogaaday in uu dhawr jeer isagu duubtay ninkii sheekadan igu sameeyey ee wacadkayagu burburay. Waxaan xasuustaa wakhtiyadaasi waxa nalooga yeedhan jiray majaalista oo aannu heesaha ka qaadi jirnay iyo waliab xaflado kale oo badan, goobahaasi ayaan heestii dhawr jeer ka qaadqaaday oo dadku aad u xiiseeyeen oo noogu celidu badatay. Warbaahinta ayaa dhawr jeer uga waraysatay heestii iyo qisada ay ku timid markii ay caanka nooqtay ee dadka oo dhammi jeclaaday. Dadka ayaa mar walba I waydiin jiray heestani Bintiyeey maxaad ka waddaa oo maxay ku saabsan tahay, markaasaan anna uga warrami jiray. Waxa aan u sheegi jiray mar walb ain heeskani aniga I khuseeyo balse qof walba oo tan igu dhacday ay isagana ku dhacday uu qaadan karo oo qalbiga ku bogsiin karo oo ay khusayso ayaan u sheegi jiray”. Ayay tidhi Binti Cumar Gacal oo ka warramaysay qisadii jacayl ee ku dhacday iyo heeso ay ka mid ahayd heestan Luggooyo oo laga sameeyey qisadaasi.
Fannaanada Caanka ah ee Binti Cumar Gacal waxa ay sheegtay in hees kale qudheeda laga sameeyey qisadan oo aanay heestaasi hore uun ku koobnayn heesaha qisadaasi ku dhacday iyada laga sameeyey waxaanay iyada oo ammuurtaasi ka sii hadlaysaa tidhi:
“Hees kale ayaa iyana laga sameeyey qisadaasi oo ay midhaheeda ka mid ahaayeen ‘Wanaaggii Dhexdeenniyo Ama Ila Wad Caashaqada, Amma aan ku waayee Wajigaaga iga qari’. Waa hees iyana aad u wanaagsan oo saamayn weyn igu leh oo qisadan laga sameeyey iyana. Dadku waxa ay u badan yihiin qof qisadan aniga igu dhacday haysato oo kale iyo kuwo qisooyin kale haystaan sidaa darteed heesaha waxa ay ku dhagaystaan dareen. Wakhtigasi waxa ay dadku ku xidhnaayeen oo ay aad u dhagaysan jireen idaacadaha Radio Muqdisho iyo Radio Hargeysa iyo waliba ciddii rikoodh haysata sidaa darteed heesihii qisadan laga sameeyey waxa ay ka mid noqdeen kuwa dadku ugu jecel yihiin ee ugu dhagaysi badan yihiin. Abwaannadu waxa ay ka heesaan ama midho ka tiriyaan waa waxan dadka ku dhacay iyo wax ku dhici kara oo kale oo la malo awaalay sidaa darteed dadku aadbay u jeclaadaan in ay qisooyinka haysta ama ku dhacay heeso u helaan si ay ugu laab qaboojistaan. Tusaale ahaan haddii aan hees kale kuu soo qaado Hees ku jirta Riwaayaddii Cilmi iyo Caado oo aannu wada qaadaynay fannaankii weynaa ee Cabdikhadar Xasan Laari Ilaahay ha u naxariistee oo midhaheeda ay ka mid ahaayeen ‘Hadduu reer Gabogaboobo, Gurboodkiisuna Xumaado Waxaa Gabay Aabahoode Xil Gudo Oo Garasho Yeelo’.
Previous PostHooyo Fooq Iska Soo Tuurtay Markii Ay Cadho Ka Qaadday Wiilkeeda Oo Soo Guursaday Gabadh Gaaban Next PostMuxuu Muj Xasan Ciise Ka Sheegay Madaxweynaha La Doortay Muj Muuse Biixi Cabdi, Muxuu Ku Soo Kordhiyay Ururkii SNM Ee Ay Ka Soo Wada Tirsanaayeen, Muxuuse Ku Sifeeyay Shaqsiyadiisa